Kukhona imikhiqizo ebalulekile ukwenza isikhathi eside. Umzimba kufuna ngezikhathi azidle. Omunye wabo --beet evamile. Uyilunga izitsha eziningi ezidumile futhi ozithandayo. Ethandwa kakhulu phakathi kwabantu ngendlela eyenza kube kungenzeka nganoma isiphi isikhathi nginazo imikhiqizo esiyisisekelo esidingekayo ukuze ukupheka, isibonelo, isaladi noma borscht obomvu - beetroot USB emiphongolweni.
Abantu Sekungamakhulu eminyaka esetshenziswa ukuze zigcinelwe Ngokuzayo ukudla kudingekile kakhulu. Ayikho ngephuzu elilodwa awuzizwa uhlale elambile. Yingakho eside kwamukelwa ukuhlehlisa ingxenye umkhiqizo futhi uwugcine kuze kube sekuvuneni esilandelayo. Lokhu ikakhulukazi libhekisela imifino aziwayo ukuthi abe uhlobo kwesizini. Experience libonisa ukuthi isitoreji at Igumbi lokushisa akunakwenzeka. Ngakho-ke, ngenhloso anjalo kufanele kube ekamelweni elihlukile, nezidingo ezithile. Kukhona izinkomba ezimbalwa ukuthi kunqunywa ikhono isakhiwo esithile noma igumbi ukuba onalo ephelele beet:
lokushisa (kusuka degrees 0 kuya +3);
umoya ohlanzekile, futhi kungenzeka angabiki (kudingeke);
umswakama (85 kuya ku-90%);
ukutholakala elangeni (kulesi simo-ke akufanele kube).
Lapho wonke la isitoreji izimo beetroot emiphongolweni kungenzeka isikhathi eside impela. Ikakhulukazi kusukela enomuzi omkhulu "ukugcinwa izinga", futhi lokho kulungile a ikhono ezingavamile imifino.
Umkhiqizo ngamunye kufanele agcinwe ngendlela ethile. Kuyadingeka ukuba ikhumbule zonke izimo ezingase zithinte inqubo. Ngakho, ukugcina beet emiphongolweni iqala ukulungiswa zemifino. impande ngalinye ukuqala ukuhlanza, esisuswayo ebusweni izinsalela ukungcola kanye nomhlabathi. Lokhu kufanele kube esomile, ngaphandle kosizo amanzi. Kungenjalo umswakama ngokweqile nakanjani kuyoholela wilting, ukuhluma, bese, mhlawumbe, ubole umkhiqizo. Lapho ukuhlanza akunakwenzeka iphendukele izinto ezicijile ukuthi kungalimaza isikhumba. Akufanele ukukuthinta umkhiqizo eyodwa kuya kwenye. Iphinde zingase zonakalise ubuqotho udonga lwangaphandle. Khona-ke kubalulekile ukuba usike eziqongweni, kusale kuphela petiole obuphelele elincane 2 ngamasentimitha. Manje umkhiqizo kuphela omisiwe emoyeni ngaphandle ukufinyelela ukukhanya kwelanga futhi usungaqala Warehousing. beetroot isitoreji emiphongolweni - akulula. Gilazi iyindawo ekahle yokuphila kulabo ubhekwa ngebhokisi lamapulangwe. Ukuze uvikeleke ngokumelene kungenzeka umswakama ngokweqile esetshenziswa emfuleni isihlabathi, Peat moss noma sawdust. Umsuka embondelene in izingqimba 3-4 kanye yamathebhu esivulekile akhethiwe athululwa.
Storage zemifino emiphongolweni kudinga ulwazi oluthile kanye nokulungiselela. Ngeke kwenziwe angesabi. Konke kufanele ayicabangile kusengaphambili. zewayini Ukulungiselela iqala ehlobo, lapho kuba kuqhathaniswa khulula. Okokuqala udinga ukhiphe zonke emashalofini, futhi egumbini kukodwa out ezinhle ehlanzekile pholisa. Khona-ke udinga ukuhlola ukuthi iyiphi emashalofini noma amagumbi abadinga ukulungiswa, futhi ukukulungisa uma kungenzeka. Ngemva kwalokho ukupenda metal izakhiwo ezikhona futhi reassemble konke. Qiniseka ukuthi uhlole indawo khona amagundane uvalwe unamathelise Mink Point. Kuyinto efiselekayo Yiqiniso, zokukhipha igciwane egumbini futhi iqalele kabusha engxenyeni engenhla isembozo phansi. Endaweni ethile enyangeni edlule isivele kungenzeka ukuletha isihlabathi fresh, sawdust, kanye nezinye izinto asizayo. Kahle kahle, iyiphi emiphongolweni is best ihlukaniswe linezingxenye ezintathu: ngoba amazambane, imifino kanye nezithelo, kanye ukuhlela kwabo ngendlela ethile. Storage zemifino emiphongolweni ngokuvamile eyenziwa ngezindlela ezihlukahlukene. Uma izaqathe emabhokisini wathela isihlabathi wet, bese-beet kufanele kube wawusomile. Ngaphezu kwalokho, imifino banesimo sengqondo esingaqondile ukushisa, ngakho-ke kungcono ukuthi ube nakho ku esesitezi esiphansi, uma igumbi tiered. Futhi-ke ngezikhathi ezithile kuyadingeka ukuze ujike bese ubukeza amakhasi imikhiqizo kubo futhi pholisa isikhathi ukuthola aphinde asuse izithelo nge sobala izimpawu umonakalo.
Indlela ukugcina umkhiqizo ebusika
Kuneminye ezinhle kumelwe uqale obakhathalelayo imikhiqizo ngaphambi kokuvuna. Kuyadingeka ukuba pre-ukuhlela egumbini futhi ucabangele indlela ukuthi kuyoba aqukethe eyodwa noma elinye zemifino. Ngokwesibonelo, isitoreji beetroot ebusika zingahlelwa ngezindlela ezahlukene:
1. On emashalofini ezibanzi, imikhiqizo ukubeka ezitjhelelako.
2. evulekile izikhwama zepulasitiki.
3. Ngo-amabhokisi noma esitsheni wahlomisa ngokukhethekile, uthele imikhiqizo isihlabathi noma ezinye impahla hygroscopic.
4. ihlombe encane esitezi egumbini elingaphansi noma emiphongolweni.
5. Thela ungqimba ezondile izithelo, efana ikhethini phezu amazambane.
6. Ngo-amabhange ngesimo kwemvelo.
Ngayinye yalezi ongakhetha has ngebuhle nebubi. Kunoma ikuphi kukuhle ukuba ligcinwe izinga izithelo kuphela. Yingakho nje kwalabo abangamazi asole bona kudingeka sicabangisise ngokucophelela ngaphambi laying futhi ushiye. Kungenjalo, ngisho komncane beet ezingonakalisa sonke isivuno.
Yini odinga ukuyazi mayelana nokugcina imifino
Ungakhohlwa ukuthi imikhiqizo kusuka esitolo engadini eliyinkimbinkimbi kakhulu kunalelo, isibonelo, amakani ka ukudla okusemathinini. Uma umkhiqizo ezipakishiwe ukumelana lokushisa ethile ngokwanele, nemibandela isitoreji imifino kunzima ukuthobela okuningi. Kumele kube khona izinto ezimbili zihlobe-: inketho letikhetselwe ibhukumaka, kanye sezulu zasendlini. Kumele kukhunjulwe ukuthi ukudla okunomsoco (imifino, imifino, izithelo) siqhubeke izinqubo yezinto eziphilayo. Izithelo abafi, bona uphefumule futhi kancane athuthukile. Uma udala kwezimo ezifanele kusitoreji zonke izinqubo zokuphila imifino kancane kancane. Ngalesi sikhathi, baba ukugcina ngokugcwele izimfanelo umsoco futhi ukunambitheka. Ngemva kwesikhathi esithile, imikhiqizo uyovele aqale yokuba aguge futhi ulahlekelwe izakhiwo wabo ozuzisayo. A Isitoreji okwengeziwe eshintsha ngisho nangendlela ezibukeka ngayo. Ngakho-ke, ayikho kulezinkulumo yemifino kungagcineki unomphela, kodwa kungenzeka ukudala izimo for esiphezulu ukusekela izici zayo ezinhle, isibonelo, kuze kufike isikhathi sokuvuna esilandelayo.
Indlela ukugcina beet ebusika
Ukuvuna imifino ngokuvamile enziwa ngesizathu esisodwa: imikhiqizo amakhambi kukhona kwesizini nemvelo futhi abakwazi sikhule ebusika endle. Konke lokhu kwenza abantu ukuhlomisa amakamelo ezikhethekile okutshalwa kungaba isikhathi nokugcina impahla yabo. Uma sikhuluma beetroot, kuba okokuqala kudingekile ukwazi izinto ezimbalwa ezingathinta kakhulu ezithinta inqubo self isitoreji umkhiqizo:
1. Ikhwalithi umkhiqizo. Akuwona wonke beetroot efanelekayo isitoreji eside. Kungcono sokuvuna ngasekupheleni futhi ongaswele lutho.
2. Imigomo nemibandela kulinywe. Phakathi nenkathi ukukhula kudingeka ukuba bagcine elikhulu ngenkasa imodi. Lokhu isici ingenye yezizathu main ezithinta izinga ukugcinwa umkhiqizo. Nge enganele ukuthambisa beet emiphongolweni kuyoba ezomile ngokushesha. Futhi okuphambene nalokho - ungaqala ubole ngokushesha luningi.
3. Isitoreji beet ebusika emiphongolweni kufanele ubanjwe ezingeni lokushisa ethile kanye nomswakama egumbini.
Ukuze alondoloze unaphakade sokuvuna, kumele zonke mibandela engenhla wahlangana. Okuwukuphela kwendlela ungakwazi ikhwalithi kanye nokuphepha komkhiqizo ukuze umzimba.
Kusho "Taktivin". Yokusetshenziswa
Gleb Romanenko ka "intern"